Ịbụ Nna - Bromley, Lewisham & Mindwich
Ị nọ ebe a: Mbido > Ahụ ike uche Lewisham > Bụ Nna
Dị ka ọ dị n’ihe ọma nile ná ndụ, ịghọ nna abụghị ihe ịma aka ya. Ma ọ bụ nwa mbụ gị ma ọ bụ nke atọ, nwa ọhụrụ bụ mgbanwe ndụ bụ isi, na-eweta ọrụ dị iche iche na-agbanwe mgbanwe mmekọrịta. Ndị otu Lewisham ịbụ nna nọ ebe a iji nyere gị aka ịnyagharịa ịbụ nna n'ụzọ kacha mma enwere ike.
Ọnye na-bụ Dad Lewisham?
Ịbụ papa Lewisham bụ maka ndị na-atụ anya/ndị nna ọhụrụ ma ọ bụ ndị nwoke nwere ọrụ ịzụ ụmụ maka ụmụ ọhụrụ na ụmụaka ruru ihe ruru afọ abụọ.
Ego ole ka ọmụmụ ihe na-eri?
Ịbụ papa bụ ọrụ efu kpamkpam; Agbanyeghị, achọrọ ndebanye aha.
N'ịbụ ndị ndị nna nwere ahụmahụ sitere n'ebe dị iche iche na-eduzi, nkuzi ahụ nke na-ewe izu ise ga-enyere gị aka:
• Ghọta ihe ịma aka nke ịbụ nna
• Lekọta onwe gị nke ọma
• Kwado onye mmekọ gị.
Ihe niile mgbe gị na ndị nna obodo ndị ọzọ na-enwe otu ahụmahụ na-akpakọrịta.
N'ime ọtụtụ ihe ndị ọzọ, usoro ahụ ga-ekpuchi:
Ịghọta njirimara/ụdị ịzụ ụmụ gị.
Na-enyocha akụkọ ifo nke 'Nna ma ọ bụ nne na nna zuru oke'.
Iwulite obi ike dika nne ma obu nwunye ohuru.
Kwado onye òtù ọlụlụ gị na ọrụ nne na nna ọhụrụ gị.
Ịghọta mgbanwe mgbanwe dị n'etiti gị na onye òtù ọlụlụ gị, ezinụlọ na ndị enyi gị.
gbakwunyere usoro egosipụtara maka ijikwa nchekasị, ike ọgwụgwụ na nchekasị.
June/Julaị 2022 nkuzi mmadụ
Mepee: ndị nna ọhụrụ ma ọ bụ ndị na-atụ anya na ndị nwoke bi na Lewisham ma na-elekọta ụmụaka na-erubeghị afọ abụọ. Kpọta ụmụ gị nye mama ezumike!
Mgbe ole: Satọde 10 ụtụtụ - 11.30 ụtụtụ, 11 Juun - 9 Julaị 2022
ebe: St Laurence Church, 37 Bromley Rd, Catford, London, SE6 2TS – Map.
NB: A na-ekenye ebe dị n'otu anyị na mbụ bịara, nke mbụ, yabụ biko debanye aha ozugbo enwere ike ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịga.
June/July usoro ọmụmụ ịntanetị
Mepee: ndị nna ọhụrụ ma ọ bụ ndị na-atụ anya ma na-elekọta ụmụaka na-erubeghị afọ abụọ.
Mgbe ole: Tuzdee, elekere asatọ nke abalị - elekere 8 nke abalị, Juun 9 - Julaị 14, 12
ebe: online site na Zoom. Biko kpọtụrụ anyị na adreesị ozi-e dị n'okpuru ebe a, anyị ga-eziga nkọwa nbanye.
email ịbụdad@blgmind.org.uk / tel 07707 274391 maka nkọwa otu esi esonyere.
"Achọrọ m ikele gị maka ohere ị ga-esonye na otu ịbụ Dad. Achọpụtara m na ihe niile amaka. Nev na ndị otu ya nwere ọhụụ na-adịghị mma, nke siri ike ịkụziri ha ihe mmụta. Dị nnọọ njikere ikwu maka isiokwu ọ bụla metụtara ụdị dị iche iche nke ịbụ nna.
Dị mfe na ezi uche nke otu esi hazie ndị otu ahụ baara m uru n'ezie, amakwaara m na ndị ọzọ nwetara ọtụtụ ihe na ya. "
Otu nna na-emecha dị ka ndị nna dị iche iche
Chọpụta otú ịbụ Papa si anakọta ma chebe ozi nkeonwe gị - lee nkwupụta nzuzo anyị.
Mindful Mums Online Otu ọlụlụ